Fandrobana vola 4 tapitrisa Ar: jiolahy 3 maty, 12 azo sambo-belona | NewsMada
Fandrobana vola 4 tapitrisa Ar: jiolahy 3 maty, 12 azo sambo-belona
20 lahy indray nanafika tany Vavatenina. Trano iray lasibatra ary nisy mpivady naratra tamin’izany. Nenjehin’ny mpitandro filaminana izy ireo ka telo ireo maty voatifitra tamin’izany. Voasambotra kosa ny 12…
Nirofodrefotra ny basy tao amin’ny fokontany Ambatobe kaominina ambonivohitr’ i Vavatenina, ny alin’ny zoma novambra hifoha asabotsy 03 novambra. Jiolahy telo maty voatifitry ny mpitandro filaminana, ary 12 voasambo-belona tamin’izany. Raha ny loharanom-baovao, jiolahy miisa 20 lahy mirongo fiadiana nanafika tamin’ ity fokontany voalaza etsy ambony ity, tokantrano iray no lasibatra ka naharobana vola 4 tapitrisa Ar, naratra avokoa ireo mpivady, saingy tsy misy ahina ny fahasalaman’ izy ireo izay manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitalin’ i Vavatenina ihany.
Nahazo antso ny mpitandro filaminana, ka tsy niandry ela ny teo anivon’ny OMC, tarihin’ny lehiben’ny disitrika fa nanome baiko ny mpitandro filaminana telo tonta ny mba hanaovana savahao avy hatrany ny tanàna sy ny ala manodidina rehetra hikarohana an’ ireo jiolahy mpanafika.
Rakitra ny fanenjehana tao anaty alan’ Ambatobe. Sady nitari-dositra ireo jiolahy no niezaka namaly tifitra tamin’ny basim-borona teny ampelatanan’ izy ireo, vokany nampiasa ny fitaovam-piadina teo am-pelatanany ihany koa ny mpitandro filaminana ka telo no indray maty raha 12 kosa no voasambom-belona. Efa toerana samihafa no nahafahana nisambotra an’ireto farany. Nisy tafaverina tamin’ ireo tompony ny vola 4 tapitrisa Ar.
Saika nitarika tamin’ny fitsaram-bahoaka
Taorian’ny fahatongavan’ny mpitandro filaminana nitondra ireto 12 lahy voasambom-belona ireto, tsy niandry ela ihany koa ny fokonolona fa nirohotra teny amin’ny biraon’ny polisy sy ny zandary fa nitaky ireo jiolahy ireo ho atao fitsaram-bahoaka. Nafindra toerana any Fenoarivo Atsinanana ireo jiolahy 12 hanaovana ny fanadihadina azy, hisorohana izay fitsaram-bahoaka izay. Voalaza fa jiolahy avy ao Toamasina monina ao amin’ny fokontany Tanambao Verrerie ny iray tamin’ ireo maty voatifitra. Misokatra ny fanadihadiana sy ny fikarohana ny naman’ireto voasambotra ireto.